ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနေတဲ့ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦး လုပ်ကြံခံရ – Burmese Online News
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနေတဲ့ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦး လုပ်ကြံခံရ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာနေတဲ့ တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦး လုပ်ကြံခံရ…
Dr Bing Liu 37 နှစ်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ University of Pittsburgh က ကွန်ပြူတာသုသေသနပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ Covid-19 ပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ဆဲလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံယန္တရား (cellular mechanism) ကိုလေ့လာနေသူဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆဲလ်တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကို ရောဂါကူးစက်ပုံနဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို လေ့လာနေရာမှာ အရေးကြီးတဲ့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကို တွေ့လုဆဲဆဲဖြစ်နေချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
(He was on the verge of very significant findings toward understanding the cellular mechanisms that underlie SARS-CoV-2 infection and the cellular basic of the following complications.)
သူဟာ တရုတ်ပြည်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး စင်ကာပူရှိ University of Singapore ကနေ Bachelor of Science နဲ့ PhD ကို Computer Science နဲ့ ရယူထားသူဖြစ်ပါတယ်။
အသတ်ခံရချိန်မှာ Dr Bing Liu ဟာ University of Pittsburgh မှာ Assistant Professor လက်ထောက် ပါမောက္ခဖြစ်ပြီး Covid-19 လူနာတွေကို လေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံ Pittsburgh မြို့စွန် Charlemagne Circle ရှိအိမ်မှာ သူတစ်ယောက်တည်းရှိနေချိန်မှာ သူဟာအိမ်အပြင်ထွက်တဲ့ အရှေ့နဲ့ အနောက်တံခါးနှစ်ချပ်လုံးကို ဖွင့်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အသက် 46 နှစ်ရှိ Hao Gu ကဝင်လာပြီး သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အရင်ကတည်းက သိထားကြပုံရပြီးတော့ ဘာကြောင့်သတ်တာလဲဆိုတာ မရှင်းလင်းသေးပါ။ Hao Gu ဟာ ကိုက်တစ်ရာလောက်အကွာအဝေးမှာရှိတဲ့ ကားဆီပြန်အရောက်မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးနေပြန်ပါတယ်။
ရဲက Hao Gu ဟာ လူသတ်ပြီးသူ့ကိုယ်သူပြန်သတ်သေသွားတာဖြစ်မယ်လို့ ယူဆထားကြပါတယ်။
Dr Bing Liu ဟာ ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်းနဲ့ ကိုယ်လုံးတို့မှာ သေနတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာ သူ့မိန်းမက အိမ်မှာမရှိပါဘူး။ သူတို့မှာ ကလေးလည်းမရှိပဲ သူ့မိဘတွေကတော့ တရုတ်ပြည်မှာ ရှိနေပါတယ်။vDr Bing Liu ရဲ့အိမ်မှာလည်း ဘာပစ္စည်းမှ မပျောက်ဆုံးပါဘူးတဲ့။ အခုလိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့တွေ့ရှိချက်တွေ့လုဆဲဆဲမှာ သေဆုံးသွားတာ အလွန်နစ်နာပါတယ်။ အခုအချိန်အထိတော့ ဒီလောက်ပဲသိရသေးပါတယ် အိုင်ပီတို့ရေ….
တခေတ်တစ်ယောက် အကျော်ကြားဆုံး ပါရမီရှင်ကြီး လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ
အဆိုတော် မျိုးကြီး Negative နှစ်ကြိမ်ပြ ၊ သုံးပတ်Quarantine ဆက်ဝင်ရမည်